Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh oo soo gabagabeeyay shirweynihii geedi socodka siyaasada Soomaaliya
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh ayaa maanta si rasmi ah u soo xiray shirweynihii geedi socodka siyaasada Soomaaliya oo shantii cisho ee la soo dhaafay ka socday hoteelka Jasiir ee magaalada Muqdisho.
Ergadii ka qeyb-gashay kulanka ayaa shantii cisho ee la soo dhaafay waxaa ay siweyn uga doodeen qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen, dib-u-hishiisiinta, nidaam-ka federaalka, dastuurka, dhismaha hay’addaha dowliga, iyo walba sidii loo gaari lahaa doorsho xor ah sanadka 2016-ka.
Madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud oo xiritaanka shirka hadal ka jeediyay ayaa sheegay inay ka go’an tahay dowladda Somalia fulinta qodobbada kasoo baxay shirka, isagoo ka dalbaday ergooyinkii shirka kasoo qaybgalay inay howsha la wadaan si ay u noqdaan qodobbadan kuwo lagu fuliyo muddooyinkii loo qabtay.
Ergada ka qeyb-gashay kulanka oo guddiyo loo qeybiyay ayaa waxaa ay soo saareen qodobo dhowr ah oo dhamaantood ku saleysan arrimihii looga dooday shirka mudadii uu socday, waxaana ay ergadu ku booriyeen dowladda in ay qodobada shirka ka soo baxay lagu hergaliyo waqti gaaban.
“Waxaa naga go’an fulinta qodobbaa kasoo baxay shirka, waxaanse codsanaynaa inaad idinkana inaad hareeraha nala qabataan si ay u noqodaan qodobbadan kuwo si wadajir ah loo fuliyay,” ayuu Xassan Sheekh ku sheegay hadal uu ka jeediyay xirtaankii shirka.
Sidoo kale madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan wixii dhaliilo ah oo loo jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya, ilaa xad wixii macquul ahna qaadan doonaan.
Waxaa kaloo uu sheegay madaxweyne Xassan Sheekh in ay ka go’an tahay in marka la gaaro sannadka 2016 la qabto doorasho, taasoo ay shacabku kusoo dooran doonaan madaxda hoggaaminaysa, isagoo xusay in taasna ay kalsooni weyn ku qabaan inay dhici doonto.
Madaxweynaha ayaa ugu danbeytii sheegay in shirar kale la qaban doono ayna ku kalsoon yihiin in shirkan uu noqon doono mid dhabbaha u xaaraya sidii Soomaaliya ay ku gaar laheyd halka la wada hiigsanayo.